Toerana misy: Emirà Arabo Mitambatra | Vaovao momba ny dia
Toerana tanjona: Emirà Arabo Mitambatra
Mariela Carril | | Emirà Arabo Mitambatra, General
Manomboka amin'ny fotoana iray mankany amin'ity faritra ity amin'ny Afovoany Atsinanana Nipoitra ny fahefana iray izay ny hareny lehibe dia avy amin'ny volamena azontsika, izay mahatonga izao tontolo izao hitodika amin'izao fotoana izao: solika. Miresaka momba ny Emira Arabo Mitambatra.
Zanaka emirata fito ireo mandrafitra ity firenena manana fiandrianana ity ary anio dia hahatadidy kely isika ny tantarany, manomboka amin'ny efitra ka hatrany amin'ny harena, ary fahafahan'ny mpizahatany izay atolotray antsika anio. Fitsangatsanganana any amin'ny saikinosy Arabo, tanin'ny dongom-boaloboka sy foko iray ankehitriny, tanin'ny trano skyscrapers sy vola.
1 Emirà Arabo Mitambatra
2 Emira Arabo Mitambatra ankehitriny
3 Emira Arabo Mitambatra sy fizahantany
Misy emirata fito mandrafitra ity firenena ity: Dubai, Sarja, Umm al-Qaywayn, Fujairah, Ajman, Abu Dhabi ary Ras al-Khaimah. Tahaka an'i Afrika, ny fahefana eropeana dia misy ifandraisany amin'ny fananganana geopolitika ny faritra. Ireo mpikaroka portogey dia tonga teto tamin'ny taonjato faha-XNUMX, nitady sy nanokatra làlana mankany Azia. Taty aoriana, tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, ny anglisy no nanao ny Hoala Persika ho toerana manan-danja amin'ny làlam-barotra ataon'izy ireo.
Amin'ny lafiny iray ny eropeana, maniry ny hanokatra varotra, amin'ny lafiny iray ny fianakavian'ny arabo mifampiraharaha amina lafiny maro satria ankoatry ny eropeana dia eo amin'ny faritra ny fanjakana Ottoman sy ny fanjakana persiana ary maninona no tsy izany, jiolahin-tsambo. Efa fantatsika izany ny anglisy Nahavita tsara tamin'ny fanapahana an'izao tontolo izao izy ireo, koa tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nanangana a mpiaro ao amin'ny faritry ny amirita ankehitriny.
Amin'ny fanaovan-tsonia fifanekena amin'ireo sefo eo an-toerana, ny Fifanarahana jeneraly an-dranomasina tamin'ny 1820 izay nanambara fa ny Arabo no handray an-tanana ny piraty. Telopolo taona taty aoriana ny Truce maritime maharitra izay namela ny sambo britanika hitety ny morontsiraka. Avy eo ny britanika dia nifindra avy teo amin'ny hatotanany ka hatramin'ny kiho ary nahatratra tamin'ny 1892 ny Fifanarahana miavaka izay tsy nety nifandraisan'ny Arabo tamin'ny fahefana hafa ary ny Fanjakana anglisy dia nanome azy ireo fiarovana arabo sy safidy varotra ho setrin'izany.
Miresaka momba ny foko arabo izay mbola tsy naheno akory momba ny fitrandrahana volamena nifindra tany izy ireo. Ka noho izany dia nihaoka perla sy nanjono ary nanangona perla fotsiny izy ireo. Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa vao sahan-tsolika sy solika aloha. Vao nanomboka ny boom. Tapitra ny ady ary nesorina ny Fanjakana Britanika ka nanomboka nifampiraharaha momba ny fahaleovantenany ireo firenena.
Niala tamin'ny UK ny UK tamin'ny 1968 ary nivory ireo emiraty mba hijery ny fomba nitohizan'izy ireo. Dubai sy Abu Dhabi dia nihaona ary nanasa ireo mpiaro an'i Bahrain sy Qatar. Ny tsy fifanarahana taorian'izay izay fianakaviana Arabo no hitarika azy ireo hisaraka, saingy tamin'ny 1971 dia teraka ny Emira Arabo Mitambatra, federasiona vaovao misy mpikambana enina. Tsy teo i Ras al Khaima tamin'io fotoana io satria nifaninana tamina faritany iray niaraka tamin'ny emiraon'i Sarja, saingy niditra herintaona taty aoriana.
Izy io dia ny Sheikh of Abu Dhabi, Zayed bin Sultan al Nahayan, izay nitana ny toeran'ny filoham-pirenena nanomboka tamin'ny 1971 mandra-pahafatiny tamin'ny 2004. Izy sy ny tetikadiny dia tratry ny fampifanarahan'ny fanjakana maoderina sy ny fifandanjan-kery eo amin'ny fianakavian'ny mpanjaka fito, izay tsy mora. Nifandray tanana tamin'ny petrodollar, ny Emira Arabo Mitambatra niditra a haingam-pandeha havaozina haingana amin'ny '90s ary noho izany ny mpiandry ondry, jiolahin-tsambo ary mpanarato perla dia lasa mpiantsehatra ara-jeopolitika manan-karena sy manan-kery.
Emira Arabo Mitambatra ankehitriny
Toy ny Vondrona Eropeana tsy ny emirates rehetra no mitovy. Misy ny tsy fitoviana ara-toekarena satria tsy zarazaraina ara-drariny ny tanimbary. Ohatra, Abu Dhabi mifantoka saika 90% ary Dubai 5% amin'izy ireo. Ary koa, ireo fanjakana roa ireo dia manana kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manokana ka manana làlam-barotra manan-danja izy ireo. Ny roa amin'izy ireo dia maneho ny 83% amin'ny harin-karena faobe, noho izany dia miankina amin'izy ireo ny emirata dimy kely indrindra amin'ny alàlan'ny hetra federaly.
Fa mora ve ny nampivondrona amiraly fito tamina fanjakana iray? Tsy dia be loatra. Nisy lalàm-panorenana nosoniavina tamin'ny 1971 ary natao hatramin'ny 1996, na dia tsy izany aza no fikasana tany am-boalohany. Eto dia voalaza izany ny renivohitra dia Abu Dhabi ary amin'ny alàlan'ny fanitarana dia ny emirany no mitarika ny fanjakana. Taty aoriana, ny lalàm-panorenana dia miresaka momba ny fampiraisana ireo rafitra manan-danja maromaro amin'ny fanjakana: ny hetra, ny vola ara-bola, ny fanabeazana, ny fahasalamana ... Ho fanampin'ny rafi-pitsarana iraisana sy ny tafika mitam-piadiana.
Androany, Ras al Khaimah sy Dubai ihany no manana ny fitsarana azy manokana ary tafatsangana izy ireo tafika mitam-piadiana Anisan'ireo matanjaka indrindra ao amin'ilay faritra izy ireo. Ny zava-drehetra dia fehezin'ny Filan-kevitra tampony federaly izay mihaona inefatra isan-taona. Ny emira rehetra dia mankany amin'ity filankevitra ity ary tendrena ny minisitra na izay voamarina, zaraina ny toerana, resahina ny lalàna sy ny tetibola. Ny filoha dia manendry ny mpanatanteraka azy manokana, fa mandinika hatrany ireo emirata rehetra.
Misy fifidianana ve any Emirà Arabo Mitambatra? VITSY Manana torohevitra ara-dalàna avy amin'ny Filan-kevi-pirenena federaly ny governemanta, izay misy mpikambana 40, avy amin'ireo emirata fito, izay voafidy amin'ny ampahany amin'ny fifidianana. ihany 300 XNUMX mahery ny olona afaka mifidy ary izy ireo dia nofidian'ny Komitim-pirenena momba ny fifidianana izay mihevitra ny firaisana, taona, fiofanana ary toerana onenan'izy ireo.
Araka izany, ohatra, tamin'ny fifidianana tamin'ny 2006, ny vehivavy sy ny lehilahy 6 voalohany ihany no nandray anjara. Androany dia lehibe kokoa ny isa ary amin'ny 2011 dia 130 sy 300 arivo izy ireo tamin'ny taona 2019. Ary ny vehivavy? Vitsy dia vitsy ny mpifidy ary tamin'ny fifidianana tamin'ny herintaona dia manodidina ny 180 no voafidy amin'ny toerana sasany, na dia fito aza no nahavita izany. Izany hoe misy vehivavy fito ao amin'ny Federal National Council.
Ny marina izany sharia, Lalàna Silamo, dia inona izany mifehy sy mibaiko ny fiainana ara-tsosialy sy politika eto amin'ny firenena. Na dia samy manana ny fahaleovantenany aza ny emiraona tsirairay, tsy misy na inona na inona mifanohitra amin'ny governemanta federaly, anjakan'ny finoana silamo. Misy ny fahalalahana ara-pinoana, saingy ny finoana Silamo irery ihany no afaka miseho ampahibemaso.
Izay nahita horonantsary fanadihadiana momba ny Emira Arabo Mitambatra na ny iray amin'ireo fanjakany dia mahalala fa misy ny zava-misy roa: ny an'ny mpanankarena sy ny an'ny mahantra. Ity farany dia mihoatra ny zava-drehetra mpiasa vahiny natokana ho an'ny indostrian'ny fananganana. Karana, Pakistanis, Bangladeshi olona mahita ny haren'ny olon-kafa amin'ny halaviran'ny lavitra. Izany indrindra no tranga any Abu Dani, Sarja na Dubai, ivon-tanàna lehibe misy mponina betsaka indrindra.
ny emiratis izy ireo dia misolo tena ny 11% amin'ny mponina ao an-toerana, olona iray tapitrisa. Tombanana ho 34% amin'izy ireo no latsaky ny 25 taona ary mankafy fanampiana lehibe avy amin'ny fanjakana. Eo koa ny hafa mpiasa vahiny, manana asa mahay, izay mahazo vola be. Amin'ny ankabeazan'ny sehatry ny angovo.
Farany, Inona no ifandraisan'ny Emirates amin'ny sisa amin'izao tontolo izao? Tokony holazaina fa firenena arabo fahatelo izy io fifandraisana diplomatika amin'i Israel, ary tsy kely izany. Avy amin'izany no ananany toerana hafa momba ny ady Palestiniana ary manohitra an'i Iran. Raha ny tena izy, manana ady amin'ny Iran izy momba ny nosy sasany izay notakian'ny UAE ho azy any amin'ny Selat Omuz ary miampanga azy ho mampiroborobo ny fanoherana anatiny amin'ny alàlan'ny fanakorontanana ny Shiita vitsy an'isa.
Zanaka Dubai sy Abu Dhabi izay kapitenin'ny politika ivelany an'ny fanjakana, firaisana ara-toekarena, ara-bola ary ara-politika. Aza adino fa a mpiara-dia amin'i Etazonia manan-tantara, hatramin'ny fahaleovantenany, ary eto dia misy miaramila amerikana naparitaka. Ny olany amin'i Iran dia nahatonga ny Emira Arabo Mitambatra hanakaiky an'i Arabia Saodita ihany koa, firenena te hanaraka ny dian-tongotry ny fahombiazan'ny mpifanolobodirindrina aminy.
Emira Arabo Mitambatra sy fizahantany
Tao anatin'izay taona faramparany dia nametraka ny ranomainty amin'ny fizahan-tany ny firenena, manandrana manararaotra azy toetrandro mafana, ny nosy artifisialy ary ny hakanton'ireo tanànanynipoitra avy tany an'efitra. Tsy isalasalana fa ny olona no mandeha aloha Dubai, toerana izay toa efa mihoatra ny an'ny menaka ny vola miditra amin'ny fizahantany.
Eto ny mpizahatany dia afaka miaina fiainana kely any an'efitra, miaraka amin'i fitsangatsanganana an-jip 4 × 4, alina arabo eo anelanelan'ny dongona sy ny ramevao, na mandeha miantsena na mivoaka amin'ny fisotroana amin'ny fiainana alina be atao.
Androany dia ny emirates Ras al Khaima sy Umm al Quwain no te hampandroso ny toekarem-pirenenan'izy ireo miaraka amin'ny fizahan-tany. Mandritra izany fotoana izany, i Fujairah dia mitady ny hahatonga ny serananany ho ivon'ny varotra an-dranomasina, Sarja no renivohitry ny kolontsaina sy ny fanabeazana, ary i Ajman dia ivon-tsambo sy indostrialy.
Ny sisa ho jerena dia raha lany ny menaka indray mandeha, araka ny fanaony, dia ho tafavoaka ireo firenena ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Emirà Arabo Mitambatra » Toerana tanjona: Emirà Arabo Mitambatra
Ahoana ny fomba hananganana fiaraha-miasa any ambanivohitra any amin'ny tanàna iray nilaozana